အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: ခေတ်သစ် အဇာတသတ် သတ်မတော်သီချင်း
ခေတ်သစ် အဇာတသတ် သတ်မတော်သီချင်း
တော်တဲ့သူက (အမျိုးတော်တဲ့သူ) ခိုင်…
မတော်တဲ့ သူက ငိုင်….။
မလုပ်ကြနဲ့….ညှိပြီး မှ ညာကြ….။
စစ်သီချင်း(၂):ရန်သူနဲ့ တွေ့တော့ ပန်းလို….
ပါးရိုက် သိမ်မွေ့ ယဉ်ကျေးသည်…။
ပေါက်ကျတဲ့ ရေက တရုတ်လက်ထည်း များများရရင်း…
တရုတ်ကြောက်…တရုတ်ကျွန် တပ်မတော်ကြီး ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်လာလိုက်ကြတာ…
ဗိုလ်ချီးတို့လာမှပဲ….ရွာလည်းပြာကျ ဆိုတဲ့ အတိုင်း…ဖြစ်နေတော့တာ ပါပဲဗျာ…။
ပေးပို့တင်ပြသူ အာလူးလေး at 2:40 AM Email This BlogThis! Share to Twitter Share to Facebook